पार्टी कम्युनिष्ट ⁄ व्यवहार गैर कम्युनिष्ट ? » छलफल
पार्टी कम्युनिष्ट ⁄ व्यवहार गैर कम्युनिष्ट ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारको उद्देश्य शान्ति, विकास, स्थिरता र जनताको हितमा काम गर्ने हो । त्यसकै लागि मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकार चाहिएको हो । जनताको अपेक्षा पनि यही हो र यही कारण जनताले निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुई तिहाईनजिकको मत दिएर सरकारमा पठाएका हुन् । त्यो जनताको चाहना पूरा गर्न इमान्दार कम्युनिस्ट नै चाहिन्छन् किनकी कम्युनिस्ट पार्टीमा इमान्दार नेता कार्यकर्ता हुन्छन्, नीति, विधि र अनुसाशनमा बस्छन काम गर्छन्, देश र जनताका लागि सोच्छन् भन्ने थियो । कम्युनिस्ट सिद्धान्तअनुसार हो पनि यही तर नेकपा पार्टी र उसको सरकारले जनचाहनाअनुसार काम गरेको छैन, यसले निश्चित वर्गका निश्चित नेताका र निश्चित घेराका निश्चित मान्छेहरूलाई मात्र सेवा दिइरहेको छ, यो पार्टी र सरकार सबैका लागि हुन सकेको छैन ।
सरकार बोल्छ तर काम गर्दैन किनकी यो सरकारलाई असफल पार्न खोज्ने, काम गर्न नदिने निश्चित घेराका निश्चित सल्लाहाकार, र विज्ञहरू छन् । सत्तामा पु¥याइदिनु पर्ने जनताले, सुविधाको भोग विलासमा रमाउने र जथाभावी गर्ने गलत मान्छेहरू, गलत सल्लाहकारहरू गलत विज्ञहरू र उच्च प्रशासकहरू ।
यही कारण नेकपाको सरकार आलोचनाको केन्द्र बनिरहेको छ । अहिले देश र जनताका लागि मिलेर काम गर्नु पर्ने बेला हो तर त्यसको सट्टा पार्टी आन्तरिक विवादमा मुछिएको छ, पार्टी नीति विधिमा चल्न सकेको छैन । निजी स्वार्थका लागि गुट स्वार्थहरू टकराइरहेका छन् । हजो निरंकुशताविरुद्ध लडेका पार्टीका सच्चा नेता कार्यकर्तालाई बिर्सिएर एकतर्फी गुटविरोधि देखिरहेका छन्, उनीहरूलाई पाखा पारिरहेका छन् । पार्टी पद्धतिमा चलाउनुपर्छ, देश, जनता र पार्टी हितमा काम गर्नुपर्छ भन्नेहरूलाई विरोधी खेमामा राख्ने गरिएको छ । पार्टीमा हिजोको कमरेडली भावना ध्वस्त भएको छ, त्याग,आदर्श भुत्ते भएको मात्र छैन, समाप्तै भएको छ । हिजोको निरंकुशताले गरेको मोजमा त्यसका विरुद्ध लडेका नेताहरू लागेका छन् । हिजो जनताले सुरक्षा दिएका, जनताले आफ्नै घरमा खाना खुवाएर राखेका नेताहरू आज राजसी ठाँटमा गाडी घोडाका अघिपछि पचासौं जना गार्डका साथ हिँडिरहेका छन् । आफ्ना र आफ्ना आसेपासेका लागि मात्र मरिहत्ते गरिरहेका छन् । यो लाजमर्दो विषय हो किनकी उनीहरूलाई जनताले आफ्नो हितका लागि पठाएका हुन् । हिजो फुत्त आएका भ्रष्ट, दलाल र माफियाले नेतृत्वको चाकडी गरेर विनालगानी सान, मानसहित माथिल्लो कमिटीमा काम पाउने, हिजो पार्टीका लागि लगानी गर्नेहरू हेरेको हे¥यै गर्नु पर्ने अवस्थाले आज पार्टीमा किचलो भएको छ । त्यतिमात्र होइन, खास खास नेताहरूलाई पार्टी भनेकै मै हो, मैले जे गरे पनि हुन्छ मैले सुख सुविधा पाए, मैले पद पाए सबैलाई हुन्छ, पार्टी, नीति, विधि, पद्धति, सिद्धान्त, सामूहिकताको भावना गोलीमार भन्ने भावना र अरूलाई सोच्दै नसोच्ने, गन्दै नगन्ने अहंकार मूल नेतृत्व र उसका नजिकका मान्छेहरूमा भएका कारण अहिलेको समस्या आएको छ । यसैले पार्टीदेखि सबैतिर समस्या पारेको छ । नेताहरूका यस्तै कामले पार्टी बदनाम भइरहेको छ, वर्ग संघर्षबाट पार्टी टाढा जान थालेको छ । यसले गर्दा जनताबाट नेकपाका नेता कार्यकर्ता अलग थलग भएका छन् ।
यो नै अहिलेको समस्याको मूल जड हो । यसले गर्दा सरकार र पार्टी संकटमा मात्रै परेको छैन पार्टीको एकतादेखि राष्ट्रिय सुरक्षा र जनताको आशामा समेत संकट आएको छ । यसैले गर्दा नीति, विधि,मूल्य, मान्यता कमजोर भएको छ, जनतको हितमा काम हुन सकेको छैन्, यो दुःखद एवं लज्जास्पद अवस्था हो । हिजो पार्टी अनुशासित थियो, जनवादी केन्द्रीयतमा चल्थ्यो, गुट हुँदैनथ्यो, सबै पार्टीका हुन्थे, कामको मूल्यांकन हुन्थ्यो, अवसरको समान बाँडफाँड हुन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो छैन । अहिले गणेशप्रवृत्ति मौलाएको छ, चाकडी र चाप्लुसीहरूको दिन आएको छ, यसैमा नेतृत्व लठ्ठ भएको छ, गुटगत प्रवृत्ति हाबी भएको छ, गुटबाहेकको कुराको सुनुवाइ भएको छैन । पार्टीमा अहिले देखिएको संकट यसैको उपज हो । यसको अन्त्य नभएसम्म पार्टी बलियो बन्दैन, पार्टी राम्रो बन्दैन । पार्टी राम्रो नबनी देशमा शान्ति, स्थिरता र विकास सम्भव छैन, जुन यो सरकार र यो पार्टीको नेतृत्वबाट अब सम्भव देखिँदैन । अहिले मुख्य नेताको प्रवृत्ति देखेर नेकपाका इमान्दार नेता कार्यकर्ता चिन्तित छन्, जनता उदासिन छन् । यो सरकार र पार्टीले हाम्रा लागि केही गर्ला कि भन्ने आशामा तुषारापात भएको छ । नेताहरूले आफूलाई जनताको सेवक ठान्नु पर्नेमा उल्टो मालिक ठान्ने गरेका छन् । पार्टी बुर्जुवा शैलीमा अगाडि बढ्न थालेको छ यसले पार्टीको आधार कमजोर भएको छ । यो दुःखद अवस्था हो कुनै आरोप होइन । नेकपाका चेतयुक्त कार्यकर्ताले हिजोदेखि भन्दै आएको कुरा हो, जुन पछिल्लो पटक पार्टीमा झन् दुःखद रूपमा प्रकट भइरहेको छ । अब यस्ता खराब आचरणहरू हटाउँदै पार्टीलाई सशक्त बनाउनु पर्छ र नेकपा पार्टी र सरकार सबैको हितको लागि भएको आभाष दिने गरीको काम आजैबाट थालिहाल्नु पर्छ । अनिमात्रै यो सरकार र पार्टी साँच्चिकै कम्युनिस्ट सरकार र पार्टी बन्न सक्छ । साँच्चैको कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसको सरकारले मात्रै देश र जनताको हित गर्न सक्छ । यसका लागि सैद्धान्तिक, वैचारिक र भावनात्मक एकताको विकास गर्नु पर्छ । समन्यायिक विधि अपनाउनु पर्छ । नेतृत्वका खल्तीमा भएका मान्छेहरूले मात्र सुविधा पाउने अरूले नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । नीति, विधि, मूल्य, मान्यतामा आधारित भएर सरकार र पार्टी चल्नुपर्छ, गुट ध्वस्त बनाउनु पर्छ । सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनका गलत तरिका र अहिले भएका कमी कमजोरीहरूलालई तत्काल हटाउनु पर्छ । यसो गरियो भने मात्र नेकपा पार्टी र उसको सरकार सही गन्तव्य अर्थात समाजवादमा पुग्न सक्छ । नत्र, रसातल भासिनुको विकल्प छैन । यसमा नेकपाका मूल नेता र नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ ।
पार्टी विभाजन हुन दिइन्न: वामदेव
नेकपा आज वारपारको बिन्दुमा
कृष्णगोपालले दिए निर्देशन
पार्टी फुटाउन खोज्ने सबै अपराधी हुन्
काँग्रेसको बैठक स्थगित
पानी आउने भो काठमाडौमा
नेतालाई अनुसाशनको डण्डा
Copyright © 2014 - Chhalphalweekly · All Rights Reserved